Ny resahan’ny bilaogy maraokana desambra 2007 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2019 3:53 GMT
Na dia “lamaody” vaovao aza ny famahanana blaogy any Maraoka, dia miely haingana be eo amin'ny Maraokana avy amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny sehatr'asa isankarazany izany. Ahitana ny dokotera, ny politika, ny mpianatra, ny antrôpôlôjista, .. sns ao.
Ary raha amin'ny teny Arabo ny ankamaroan'ny bilaogy any amin'ny firenena Arabo hafa, dia toa tia mibilaogy indrindra amin'ny teny Frantsay ny bilaogera Maraokana. Misy ihany koa ny bilaogy maromaro amin'ny teny Arabo ary vitsivitsy amin'ny teny Anglisy.
Tsy azo heverina ho toy ny “revolisiona” ny famahanana bilaogy any Maraoka hoy i Mohamed Zainabi tamin'ny resadresaka nataony tamin'ny eMarrakech [fr]. Ary notantarainy tao amin'ny bilaoginy Big Blog amin'ny teny Frantsay fa na dia misy manampahefana ao Maraoka aza mandray ny Bilaogy amin'ny fomba tsara dia “mbola tsy mandray dingana lehibe izy ireo hampielezana ny fampiasana izany ao Maraoka”.
Na izany aza, an'i Laila Lalami, mpanoratra monina ao Portland, Oregon ny iray amin'ireo bilaogy Maraokana voalohany. Nanomboka ny bilaoginy amin'ny teny anglisy Moorishgirl izy tamin'ny taona 2001.
Isaky ny Alarobia dia handefa tatitra momba ny zavatra nahasarika ireo bilaogera Maraokana nandritra ny herinandro aho. Ary tena mientanentana aho momba izany, satria heveriko fa tena mahaliana ny tontolon'ny bilaogy Maraokana.
Avelao aho hanome anao tsiro ny zava-nitranga tamin'ny herinandro lasa.
Bluesman, mibilaogy amin'ny teny Arabo, malahelo izy fa mbola tsy manana fahalalahana ny mpanao gazety Maraokana rehefa mety hiteraka olana tsy misy fiafarana amin'ny manampahefana ny “vaovao lehibe (scoop)” alefan'izy ireo.
Manontany tena ao amin'ny bilaoginy amin'ny teny Frantsay Bikhir Nation i Amazigh raha manana laharan-tariby maitso iantsoana ny olom-pirenena Maraokana ary mety hahatsiaro ho “voaaro” izy hiantso mba hiampangana ireo “polisy manamboninahitra” sasany mpanao kolikoly.
Navoakan'i Jawad tao amin'ny blaoginy amin'ny teny Anglisy ny tatitra navoakan'ny Human Rights Watch manentana ny governemantan'i Maraoka mba hampitsahatra ny tsimatimanota ho an'ny mpitandro filaminana sy hampitombo ny fahaleovantena ara-pitsarana mba hanamafisana ny lova navelan'ny Equity and Reconciliation Commission(ERC) ao amin'ny firenena. Nilaza i Jawad fa mifanaraka amin'ny an'ny HRW ny fomba fijeriny ity raharaha ity . “Satria tsy mino aho fa afaka mihavana tanteraka amin'ny lasa feno herisetra sy miandrandra hoavy mamirapiratra ny vahoakantsika raha mbola manohy mankafy ny tsimatimanota tanteraka ireo tompon'andraikitra tamin'ny fanararaotana taloha”, hoy izy nanampy.
Tamin'ny lahatsoratra hafa, Miloud Atmani mangataka amin'ny mpamaky ny bilaoginy amin'ny teny Arabo mba hilaza ny heviny momba ny lalàna vaovao izay manameloka ireo mpiditra an-tsokosoko ao Derb ghellaf’. Ho an'ireo mbola tsy zatra an'i Maraoka, avelao aho hanazava fa ny Derb Ghallef dia tsena iray tena manokana ao Casablanca izay ahafahanao mahita izay rehetra tadiavinao, toy ny trano kely (nid), ny lovia, latabatra sy fitafy marika iraisam-pirenena. Mety mahita CD sy DVD latsaky ny 2 dolara ihany koa ianao satria piraty izy ireo. Vao haingana ny governemanta Maraokana no namoaka lalàna manasazy ireo mpanao piraty amin'ny onitra goavana ary indraindray fampidirana am-ponja. Manontany tena i Atmani raha toa ka vahaolana manan-danja izany kanefa olona manana diplaoma tsy an'asa ny ankamaroan'ireo voakasik'ity lalàna ity.
Othmane Boumaalif, dokotera mibilaogy amin'ny teny Frantsay, mangataka amin'i Driss Basri mba “hiala!” Milaza i Othmane tao amin'ny lahatsorany farany fa ny akanjo “manam-pahaizana” izay noezahin'ny ministra Maraokana taloha notafiana “.. dia tsy mifanentana aminy. Nofaranany ny lahatsorany tamin'ny “fitabatabana” amin'i Basri hoe”tsy mila anao intsony izahay“.
Sonia, tovovavy Maraokana monina any Ejypta ary mamahana blaogy amin'ny teny Frantsay, miresaka ao amin'ny lahatsorany farany momba an'i Ayman Nour, Ejiptiana malaza amin'ny fanoherana, izay nahazo sazy an-tranomaizina dimy taona ho mamoroporona (manao hosoka).
Toa diso fanantenana ihany koa izy nahita fa na dia ny mpiara-miasa aminy aza tsy mihevitra fa misy olona hafa afaka hisolo an'i Housny Moubarak.
Amin'ny fiafaran'ny tatitra tsirairay, dia hanana sehatra iray antsoina hoe “Coup de coeur” momba ny lahatsoratra hitako fa miavaka aho.
Amin'ity herinandro ity aho dia nisafidy an'i Mounas ao amin'ny Imagin izay namoaka ny tononkalo mahery vaika nataon'ilay mpikatroka Maraokana Saida Lemnebhi [fr], maty taorian'ny fitokonana tsy hihinan-kanina tamin'ny 11 Desambra 1977.
Tiako koa ny mampahafantatra anao bilaogy iray tena kanto. Manohy mampitolagaga i Amud Awal ary mahatalanjona tsotra izao ny lahatsoratra tamin'ity herinandro ity. Ho tsapanao ny maha manam-pahaizana ny mpanoratra izay manana ny solonanarana, Laseine.
Izay no tamin'ity herinandro ity. Amin'ny Alarobia indray, Inshallah;)